Gabalka Nogob oo Horumarinta iyo Dib u Curashada Degaanka ka Qaday – Rasaasa News
Gabalka Nogob oo Horumarinta iyo Dib u Curashada Degaanka ka Qaday
May 7, 2012 Gabalka Nogob oo Horumarinta iyo Dib u Curashada Degaanka ka Qaday?
Jijiga, May 07, 2012 [ras] – Hore waxaanu u baahinay qoraalo ka hadlaya baahida gabalka Nogob, mudo ka dib, waxaa lagu daabacay bogga ku hadla afka dawlada degaankaSomalida ee cakaara.com mashaariic horumarineed oo door ah in laga fulinayo gabalka.
Mashariicda la shaaciyey in gabalka laga fulinayo waxay isugu jireen wadooyin, ceelal, barkado biyood, rugo caafimaad, dhismeyaal Iskuul iyo dhismayaal xafiisyo dawladeed.
Xiliga la sheegay Mashaariicda laga fulinayo gabalka Nogob, waxaa laga joogaa mudo labo sano ah, walina ma jiro hal mashruuc oo laga fuliyey gabalka sabab ay ku dhacdayba.
Gabalka Nogob waa gabalka ugu dibu dhacsan sagaalka gabal ee uu ka kooban yahay degaanka Somalida Ethiopia. Waxayna ahayd in gabalka la siiyo muhiimada kowaad ee mashaariicda horumarinta ee laga fulinayo degaanka Somalida Ethiopia.
Gablada qaar waxaa laga fulay mashaariic door ah oo aan ku jirin miisaaniyada mashariicda ay dawladu qorshaysay sanadihii 2010/2011 iyo 2011/2012. Waxaana la iswaydiin karaa siday ku dhacday in mashaariic aan qorshaha ku jirin la fuliyo, kuwii qorshaysnaana aan la fulinin?
Dawlada deganku marna kama hadlin sababta ay u fuli waayeen mashaariicda la jaan gooyeyey labo sano ka hor, si ay u qanciso dadweynaha u dhashay gabalka iyo aqoonyahanka dusha ka eegta mashaariicda horumarinta ee dadweynaha noloshooda kor loogu qaadayo.
Gabalka Nogob waxaa ka jirta nabad la isku halayn karo, sida ay dawlada degaanku marar badan ku war bixisay. Dadweynaha degaankuna waxay si xoog leh uga hawl galeen ka qayb qaadashada dhinaca nabad galiyada. Nasiib daro iyo niyad jab waxay haysataa dadweynaha u dhashay gabalka, niyad jabkaas oo ku aadan balan qaadka dawlada ee aan horusocdka lahayn.
Dad xog ogaal ah ayaa waxay sheegeen in fulinta mashaariicda lagu fuliyo amarka masuuliyiinta, iyaga oo tusaale u qaatay riiggaga biyaha ee ay dawladu soo gaday waxaa lagu amray in ay qodaan meelo aan hore qorshaha miisaaniyada degaanka ugu jirin.
Hadaba, maxay dawlada degaanku ka filaysaa dadwaynaha u dhashay gabalka Nogob? Xaqiiq waxaa ah in ay dadweynaha gabalku aad ugu dhaliilayaan dawlada degaanka hagar badan iyo ka leexin mashaariicdii ay xaqa u lahaayeen in loo qabto.
Waxay dadweynaha gabalku isla dhexmarayaan in mashaariicdii gabalka loogu talo galay loo leexiyey gabalka Dhagaxbur.